२८ चैत, काठमाडौं । धेरै होइन, मात्र दुई महिना अगाडिको अवस्था सम्झौँ । नेपालको छिमेकी चीनमा कोरोनाले कहर मच्चाइरहँदा बाँकी विश्व आफ्नै लयमा हिँडिरहेको थियो । पश्चिमा देशका मिडियाले त चीनलाई गिज्याउन पनि बाँकी राखेनन् ।
अहिले अवस्था उल्टिएको छ । संघर्षपूर्वक कोरोनाबाट बाहिर निस्केर चीन आफ्नो लयमा फर्किँदैछ । कोरोनाको इपिसेन्टरका रुपमा रहेको वुहान सहरलाई पनि उसले यसै साता खुला गर्‍यो । चीनमा कोरोना संक्रमण अहिले छिटपुट मात्रै बाँकी छ ।
तर, बाँकी विश्वलाई भने कोरोनाले हाराबारा खेलाइरहेको छ ।
कोरोना भाइरस चीनबाट फाल हान्दै युरोप पुग्यो । इटाली, फान्स, स्पेनजस्ता पूर्वाधार सम्पन्न देशमा तवाही मच्चायो । अनि अमेरिकामा पसेर अड्डा जमायो । विश्वकै शक्तिशाली मानिएको राष्ट्र अहिले ‘तोरीको फुल’ देखिरहेको छ ।
यतिबेला कोरोना भाइरसबाट आक्रान्त विश्वका शक्ति देशहरु त्यही चीनले देखाएको बाटो हिँडिरहेका छन्। जसको शासन प्रणालीलाई उनीहरुले सधैँ हियाउने गर्थे । समाजलाई बन्द राखेर जनताको स्वतन्त्रता हनन गरेको भनेर आलोचना गर्थे । अहिले उनीहरुलाई त्यही कम्युनिस्ट राष्ट्रको सहायता चाहिएको छ । अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको लागि अमेरिकाले समेत चीनसँग हात फैलाउनुपर्ने अवस्था आएको छ ।
दुई महिना अगाडिसम्म कोरोना चीनका लागि आतंकको विषय थियो । अहिले व्यापारको विषय बनेको छ । युरोप-अमेरिकादेखि भारत-नेपालसम्म मेडिकल सामग्रीहरु चीनबाट हारालुछ गर्दै निर्यात भइरहेका छन् । जुन महामारीले चीनको अर्थतन्त्र धराशायी बनाउने आशंका गरिएको थियो। त्यही महामारीबाट चीनले प्रशस्त पैसा आर्जन गर्न थालेको छ।
चीन सरकारको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार उसले विश्वका ५० भन्दा बढी राष्ट्रलाई कोभिड-१९ सँग लड्न झण्डै डेढ अर्ब डलर (डेढ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी) विभिन्न सामग्री आपूर्ति गरिसक्यो । यो गत मार्च १ देखि गत शनिबारसम्मको आँकडा हो ।
चीनले निर्यात गरेका सामग्रीहरुमा मास्क मात्रै तीन अर्ब ८६ करोड थान छन् । यसैगरी, दुई करोड ७५ लाख थान पीपीई, २४ लाख १० हजार थान इन्फारेड थर्मोमिटर उसले निर्यात गरेको छ । साथमा १६ हजार भेन्टिलेटर -चार हजार इन्भेसिभ भेन्टिलेटरसहित) र टेस्टिङ किट्सहरु पनि ।
जतिबेला चीनमा कोरानाको संकट उत्पन्न भयो, चिनियाँ कम्पनीहरुले मेडिकल सामग्रीहरुको उत्पादन र वितरण ह्वात्तै बढाएका थिए । चीनमा कोरोना संक्रमण कम भइसकेपछि त्यहाँ माग घटेको छ । त्यसैले उत्पादित सामग्रीहरु बाहिर निर्यात गर्न थालिएको हो ।
कोरोनासँग जुझिरहेका अधिकांश राष्ट्र, चाहे जति शक्तिसम्पन्न किन नहुन्, तिनमा अहिले पीपीई लगायतका सामग्रीहरुको अभाव छ । ती देशमा आफ्नो उत्पादनले धान्न सक्ने अवस्था नै छैन । तर, किन्ने कहाँ ? सबैजसो देश या त प्रकोपसँग लडिरहेका छन्, या प्रकोपबाट बच्न उच्च सतर्कता अपनाइरहेका छन् । त्यसैले यस्ता हेल्थ किटहरु उच्च परिमाणमा बेच्न सक्ने अवस्थामा चीनबाहेक अरु राष्ट्र छैनन् ।
अत्यधिक मागसँगै मूल्य त बढ्ने नै भयो । कतिपय चिनियाँ कम्पनीले एउटै सामग्रीको मूल्य १०-१५ गुणासम्म बढाएर बेचिरहेका छन् । त्यो पनि किन्नलाई हानाथाप नै छ । नेपालमा सरकारले आयात गरेका सामग्रीहरु पनि अत्यधिक मूल्य तिरिएको भनेर देशभित्र आलोचना भएको थियो ।
केही दिनअघि ब्राजिलले आफूले चीनबाट ल्याउन ठिक्क पारेका ठूलो परिमाणमा मेडिकल सामग्रीहरु बढी मूल्य तिरेर अमेरिकाले ‘हाइज्याक’ गरेको आरोप लगायो । यसैबाट थाहा हुन्छ कि संकट कति गहिरो छ ।
चीनको उत्पादन क्षमता
कोरोनाको कहर सुरु भएदेखि चिनियाँ कम्पनीहरुले मेडिकल सामग्रीहरुको उत्पादन लगातार बढाइरहेका छन् । उद्योग तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार अहिले यहाँ दैनिक १५ लाखभन्दा बढी पीपीई तयार हुन्छन् । यसैगरी, एन९५ मास्कको उत्पादन क्षमता दैनिक ३४ लाख थान पुगेको छ । गत मार्च १५ सम्म पीपीई दैनिक आठ लाख ४२ हजार र मास्क १८ लाख मात्रै उत्पादन भइरहेको थियो ।
सरकारद्वारा अनुमतिप्राप्त कम्पनीहरुहरुले मात्रै दैनिक दुई लाख ९० हजार प्रोटेक्टिभ गगल्स उत्पादन गरिरहेको अधिकारीहरु बताउँछन् । यसैगरी, दैनिक चार लाख १० हजार अन्फारेड थर्मोमिटर उत्पादन भइरहेको छ । यो आँकडा पनि एक महिना अगाडिको तुलनामा निकै बढी हो ।
यस्तै, अहिले चीनमा एक सातामा दुई हजार दुई सय युनिट इन्भेसिभ भेन्टिलेटर उत्पादन हुन्छन् । यो विश्वव्यापी उत्पादनको झण्डै पाँच भागको एक भाग हो । भेन्टिलेटर तयार गर्नका लागि आवश्यक सामानहरुको भने अभाव हुन थालेको कम्पनीहरुले बताएका छन् ।
तर, अझै पनि विश्वको माग धान्न सकिरहेको छैन चीनले । यही मौकामा व्यापार गर्ने होडमा केही कम्पनीहरुले सरकारको अनुमतिबिना अनाधिकृतरुपमा समेत उत्पादन गरिरहेका छन् । ती सामानहरुको गुणस्तरमा आफू जिम्मेवार नहुने चिनियाँ सरकारले बताएको छ । उसले अनुमतिप्राप्त कम्पनीहरुको सूची हेरेर मात्रै सामान खरिद गर्न अन्य देशलाई आग्रह गरिरहेको छ ।
चीनले कोभिड-१९ सँग लड्न विश्वभरका राष्ट्रलाई स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति गरेर धन्यवादको पात्र त बनेको छ । तर, यसबीचमा केही विवादहरु पनि सतहमा आएका छन् । युरोपका नेदरल्यान्ड्स, स्पेन र स्लोभाकियाजस्ता देशमा चिनियाँ सामग्रीको गुणस्तरलाई लिएर ठूलै बबण्डर भयो ।
कोरोनाबाट अत्यधिक प्रभावित राष्ट्रका रुपमा रहेको स्पेनले चिनियाँ कम्पनीसँग गत २७ मार्चमा खरिद गरेका टेस्टिङ किट्सहरु गुणस्तरीय नभएको भन्दै बजारबाट फिर्ता गर्‍यो । ती किट्सहरुको एक्युरेसी केवल ३० प्रतिशत रहेको स्पेनले दाबी गरेको छ । यसमा स्पेन स्थित चिनियाँ राजदूतावासले आपूर्तिकर्ता सरकारको लाइसेन्सप्राप्त नभएको स्पष्टीकरण दियो ।
गत ३१ मार्चमा चीनको नेसनल मेडिकल प्रोडक्ट्स एड्मिनिस्ट्रसनले कोरोना भाइरसका टेस्ट किट्स निर्यात गर्नेहरुले सरकारबाट अनिवार्य दर्ता प्रमाणपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यसैगरी, अर्को युरोपेली राष्ट्र नेदरल्यान्ड्सले चीनबाट आयात गरिएका दशौं‌ हजार मास्क अनुहारमा राम्ररी नबसेको र यसले भाइरस रोक्न नसक्ने भन्दै आलोचना गर्‍यो । यसमा प्रतिक्रिया दिँदै चिनियाँ अधिकारीले आफ्नो देशमा फरक-फरक गुणस्तरका निर्यातजन्य वस्तुहरु उत्पादन हुने भन्दै तिनीहरुको प्रयोग उचित ढंगले गर्नुपर्ने बताए ।
स्लोभाकियाका प्रधानमन्त्री इगोर मातोभिकले गत महिना चीनबाट प्राप्त गरेका १० लाखभन्दा बढि टेस्ट किट्सहरु काम नलाग्ने भएकाले नदिमा बगाइदिएको दावी गरे । यसमा प्रतिक्रिया दिँदै चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले ‘थथ्यका आधारमा समस्याको समाधान खोज्न र यसलाई राजनीतिक रंग नदिन’ आग्रह गरे ।
उनले भने, ‘हामीले पनि सुरुमा कोरोनासँग लड्दा विभिन्न देशबाट ल्याइएका सामग्रीमा खोट भेटेका थियौं । तर, ती देशको राम्रो मनसायको कदर गर्दै कुनै विवाद गरेनौं ।’
नेपालमा पनि चीनबाट आयातित सामग्रीहरुको गुणस्तरमा धेरै प्रश्न उठेका छन् । वास्तविक मूल्यभन्दा कयौँ गुणा बढी तिरेर सामान आयात गरिएको थियो । ती सामान पनि मागबमोजिम नभएपछि सरकारले आयातकर्तासँगको सम्झौता तोडेर नयाँ प्रक्रियामा गइसकेको छ ।
त्यसो त सबै देशले चीनबाट प्राप्त सामग्रीहरुमा खोट लगाएका छैनन् । उदाहरणका लागि इटालीले चीन र क्युवाजस्ता राष्ट्रबाट संकटको बेला प्राप्त सहायताको खुलेर प्रशंसा गरेको छ । त्यहाँ चिनियाँ सामग्री ठूलो संख्यामा आयात भएर प्रयोगमा आइरहेका छन् ।
चीन अहिले हरेक हिसाबले विश्वकै शक्तिसम्पन्न मुलुकको सूचीमा पर्छ । कोरोना भाइरसको प्रकोपलाई उसले जसरी नियन्त्रणमा लिन सफल भयो। त्यसले विश्वस्तरमा चीनको साख अझ उच्च बनाएको छ । अहिले अमेरिकाजस्तो चीनलाई प्रमुख प्रतिस्पर्धी ठान्ने देशले पनि कोरोनाविरुद्ध लड्न उसैको मुख ताक्नु परिरहेको छ ।
जतिबेला चीनमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन थाल्यो, त्यसबेला अमेरिकाले आफूप्रति रुखो व्यवहार गरेको चीनले आरोप लगाएको थियो । चीनको वुहान सहरमा संक्रमण देखिनासाथ अमेरिकाले अत्यावश्यकबाहेक बेइजिङस्थित आफ्नो दूतावासका सबै कर्मचारी तथा तिनका परिवारलाई फिर्ता बोलाएको थियो । साथै, चीनबाट वा पछिल्लो दुई साता त्यहाँ गएका कुनै पनि देशका नागरिकलाई आफ्नो देशमा प्रवेश नदिने निर्णय उसले लिएको थियो ।
यस्तो कठोर कदम चाल्ने विश्वमै पहिलो देश अमेरिका थियो । यसलाई लिएर चीनले ‘अमेरिकाले अनावश्यक त्रास उत्पन्न गर्न खोजेको’ आरोप लगायो । अहिले आएर अमेरिका आफैँ कोरोनाको भुङ्ग्रोमा परेको छ । संसारमा सबैभन्दा बढी संक्रमित अमेरिकामा नै छन् । संक्रमित संख्या चार लाख नाघ्दा मर्नेहरुको संख्या १५ हजार नाघेको छ । कोरोनालाई परास्त गर्न अमेरिकाले कुनै आक्रामक रणनीति लिन सकेको छैन ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कोरोनाभाइरसलाई बारम्बार ‘चाइनिज भाइरस’ को नाम दिए । जसमा चीनले आपत्ति जनायो । इटालीले समेत अमेरिकाको लहैलहैमा राखेर यसलाई ‘चाइनिज भाइरसको संज्ञा दिएको थियो । यही ‘चाइनिज भाइरस’ ले गाल्दै लगेपछि दुबै देश चीनसँग सम्बन्ध सुधार्नेतर्फ लागेका छन् ।
कोरोनाको प्रकोपले अमेरिका, इटाली हल्लिइरहँदा चीनले कुनै प्रतिशोधको व्यवहार देखाएको छैन । बरु सहयोग नै गरिरहेको छ । अमेरिकालाई स्वास्थ्य सामग्रीहरु उल्लेख्य परिमाणमा निर्यात गरिसकेको चीनले भविष्यमा पनि सहयोग जारी राख्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
अब नयाँ महाशक्ति चीन ?
अहिले कोरोनाभाइरस नियन्त्रणमा धेरै देशहरु चीनको शरण परिरहेका छन् । विश्वको नक्शा हेर्ने हो भने अमेरिका र ल्याटिन अमेरिकी देशहरुलाई छोडेर बाँकी देशहरुमा कोरोनाले सुँड पसारिसकेको छ । यस्तो बेला अनुभव र स्रोत-साधन दुबैले धनी चीनमाथि सबै देशको आशापूर्ण नजर छ ।
चीन पहिल्यैबाट विश्वको ‘म्यानुफ्याक्चरिङ हब’का रुपमा चिनिन्छ । चीनका उत्पादनहरु विश्वभरि फैलिएका छन् । व्यापार फैलिनु भनेको प्रभाव विस्तार पनि हो । अहिले चीनबाट मेडिकल इक्युपमेन्ट आयात गरिरहेका देशहरु स्वभाविकरुपमा चीनप्रति अनुग्रहित वा ऋणी बन्नेछन् ।
यता अमेरिकासँग कोरोना भाइरसबाट मुक्तिका लागि कुनै बलियो कार्ययोजना छैन । राष्ट्रपति ट्रम्पले देशलाई लकडाउन गरेका छैनन् भने डढेलोजसरी भाइरस फैलनबाट रोक्न पनि सकेका छैनन् । बडो फुर्तीसाथ उनले ‘अमेरिका बन्द हुनका लागि बनेको देश होइन’ भने पनि अहिले उनको त्यो फुर्ती सेलाएको छ । तर, पनि अब कुन मोडेलमा जाने भन्नेमा उनी अन्योलमै देखिन्छन् । जबकि अमेरिकी स्वास्थ्य प्रणालीमा संकट आइसकेको छ ।
ट्रम्प स्वयंले कोरोना भाइरसबाट अमेरिकामा दुई लाख ४० हजारसम्म मानिसको मृत्यु हुनसक्ने बताएका छन् । यदि साँच्चै त्यस्तो भयो भने अमेरिकालाई मानवीय मात्र होइन, आर्थिक रूपमा पनि अभूतपूर्व क्षति हुन सक्छ । उसको सुदृढ अर्थतन्त्र धराशयी बन्न सक्छ । त्यसबाट उठेर विश्वमा आफ्नो पुरानो दवदबा फर्काउन अमेरिकालाई सहज हुने छैन । त्यो अवस्थामा अमेरिकाको विश्व महाशक्तिको ताज भुइँमा खस्न र त्यसलाई चीनले टिपेर आफ्नो शीरमा लगाउन असम्भव छैन ।